प्रस्तुतीकरण: १० स्लाइडशेयर लाभ उठाउनको लागि सुझावहरू Martech Zone
शुक्रबार, अगस्त 17, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
म संग अविश्वसनीय सफलता भयो SlideShare धेरै बर्षहरूमा, तर याद गर्‍यौं कि हाम्रा धेरै ग्राहकहरू सफल भएनन्। मेरो स्लाइड सेयरमा ,313१50,000 भन्दा बढी अनुयायीहरू छन् साथै XNUMX०,००० भन्दा बढी दृश्यको साथ साथै एक जोडी प्रस्तुतीकरणहरू जसले स्लाइडशेयरको गृह पृष्ठ बनाउँदछ। पछिल्ला केहि बर्षमा, मैले पहिलो पटक प्रयोग गर्न सुरु गरेको भन्दा म प्लेटफर्मबाट कसरी अझ बढी सिक्ने भन्ने कुरा सिकेको छु। केहि तरिकाहरू मैले आफैंमा फेला पारे, र अन्य मलाई व्यवसायमा अन्य सफल प्रस्तुतकर्ताहरू द्वारा दिए।
हाम्रो एक ग्राहकले भर्खर सोधेको कसरी पूर्ण स्लाइडशेयर लाभ उठाउन सकिन्छ ताकि मैले यस प्रस्तुतीकरणलाई सँगै राखें ... धेरै समय बित्यो! रमाईलो गर्नुहोस्!
टैग: सबै भन्दा राम्रो स्लाइडशेयर प्रस्तुतीकरणकसरीस्लाइडसेयर लाभ उठाउनुहोस्LinkedInस्लाइड शोslideshare लिंकहरूslideshare सुझावहरूस्लाइड्स ट्रिकहरू